Ụbọchị My Pet » Ị Pụrụ Isi Chọta Ezi Ịhụnanya Online?
emelitere ikpeazụ: Aug. 03 2020 | 3 min agụ
Dị nnọọ afọ iri gara aga online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ fọrọ emetụbeghị, na ndị na-maara banyere ya chere na ọ bụ a iju onu maka n'ezie 'si n'ebe' ụdị ma ọ bụ n'ihi na sikwara ike njite ndị ndị na-apụghị a na ụbọchị na 'nkịtị ụzọ'.
Ụwa agbanweela! Online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ norm now maka ọrụ n'aka, ọrụ kpọrọ ihe na-, Otú ọ dị, ọ bụghị nanị ndị nọ n'ọrụ ndị jumped na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ụgbọ oloko – oh dịghị! Onye ọ bụla si di ụzọ na-esote gị Uncle Sam yiri ka ike na ya! Ochie na-eto eto, ndị ikom na ndị nwanyị si n'agbụrụ dị iche iche nke ndụ, okpukpe, agbụrụ na nzụlite na-eme ya. Online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị agbanweela si ka ihe nanị 'owu na-ama obi' ga-atụle, n'ịghọ a kpọrọ mainstream ụzọ ụbọchị. Ọbụna ndị mara mma, ihe ịga nke ọma ndị na-eme ya, nri tinyere onye ọ bụla nke ọzọ! N'ihi na anyị niile na-ghọtara nnọọ otú adaba ọ bụ! Na nke a online oge ọ bụ a eke progression.
Ya mere, gịnị bụ uru na ọghọm nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị online na ị pụrụ n'ezie ịtụ anya ịchọta ezi ịhụnanya dị otú a?
Ọfọn ụfọdụ n'ime uru ndị doro anya. Ị ịnweta ọtụtụ ndị ọzọ karịa gị ga-enwe ike izute site mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọ bụla nke na omenala ụzọ. Ma nke a nwekwara ike bịa na a ọgbụgba na ndị na ọdụ, nke pụtara na e nwere ọtụtụ ndị ga-enwe ike ịhụ gị onye i nwere ike iji anya nkịtị na-amasị jikọọ na. Ọzọkwa na e nwere ụfọdụ ego nke 'ngwa ngwa ntụgharị' nke ahụ pụrụ ime na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, nke ma ọ bụrụ na ị na-adịghị akwadebe maka ya, nwere ike ịhapụ ka o chewe nnọọ mbà n'obi.
Gịnị ka m na pụtara site 'ngwa ngwa ntụgharị'? Ọfọn i nwere ike na-ekwu okwu na onye otu ụbọchị, naanị ka ha kpamkpam akwụsị kwụsịrị Rada ọzọ. Nke a bụ nnọọ nkịtị. Ị ga-eziga e-Gburu na mgbe ina sị na likelihood bụ na ị ga-enwe ụfọdụ ị dịghị aza ma. Ọ bụ nnọọ obere onye karịa ụfọdụ nke omenala ụzọ nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị a na ewute ụfọdụ ndị. M chọpụtara na nke a yiri ihe na iti ndị okenye ọgbọ ike, ka ha na-eji na ihe courteous omume nke omenala mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, ebe ka ihe atụ ị ga-agwa onye ọ bụrụ na ị na-achọghị ka na-akpa ha ọzọ, na ọ dị nnọọ bụghị dị ka online (ọbụna ma ọ bụrụ na anyị chere na ọ ga-).
Otú ọ dị ma ọ bụrụ na i nwere ike na-anabata ndị a dị nta nuances, M na-eche na ọ pụrụ ịbụ oké ngwá ọrụ maka ejikọta na ndị mmadụ, na ee ọbụna maka ịchọta ịhụnanya.
N'ezie e nwere ihe a obere obere ihunanya na ndị ọzọ 'iwu' banyere okwu site na e-mail, Otú ọ dị ka ọ pụrụ ịdị a uzu ịhụ ihe e-Gburu ị ga-esi na nkata na nwere ịhụnanya ọdịmma. Na N'ezie ma ọ bụrụ na ị na-ahụ n'ezie 'na onye' mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-adọ, na romance nwere ike Njirimara ọzọ mfe mgbe ahụ.
Ị na-enwe na-akwadebe maka eziokwu ahụ ị ga-eleghị anya izute ọtụtụ ndị ị ga-ada na ịhụnanya na- – N'eziokwu nwere ike ị gaghị ọbụna na-amasị ha! Onye ike biputere a oké profaịlụ ma mgbe ị izute ha ke ata ụwa njikọ dị nnọọ nọghi ya. Ọzọkwa lezie anya n'ihi na e nwere ụfọdụ scammers online, ndị na-abụghị ezigbo ya na-dị nnọọ si na-agbalị ojoro gị maka ego ma ọ bụ ihe onwe onye nkọwa. N'ebe na-adịghị na-ahụkarị na m ahụmahụ, ma ha e na mix. E nwekwara ndị na-dị nnọọ 'inwe fun', ndị na-online achọ mmekọahụ, na ọbụna ụfọdụ ndị na-lụrụ di na nwunye. Otú ọ dị ma ọ bụrụ na i nwere ike ijikwa a na agaghị edepuchaala kpaliri, mgbe ahụ ị na- nwere ike izute onye online bụ onye zuru okè n'ihi na ị, na onye ozugbo ị izute na ndụ n'ezie, ị nwere ike ịkekọrịta ezigbo ịhụnanya na-. M maara nke ọtụtụ ihe ịga nke ọma di na nwunye ndị zutere otú a.
Dị na-echeta ezie, ruo mgbe ị zutere ha na onye ọ bụghị n'ezie.
Ya mere Real Life = Real Ịhụnanya.
Ma ọ bụ nanị mgbe ị na-ewere ya na-anọghị n'ịntanetị na n'ime ndụ n'ezie na a ezi njikọ pụrụ ịzụlite n'ime a mmekọrịta ịhụnanya.